Apple waxay gorgortan kula jirtaa inay iibsato xuquuqda filimkii ugu dambeeyay ee Robert Zemeckis | Waxaan ka socdaa mac
Mar labaad, wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira adeegga fiidiyowga ee qulqulaya Apple ayaa laga heli karaa daabacaadda kala duwan. Apple, sida warbaahin kale oo badan, waxay si joogto ah uga wada xaajoodaa iibsashada filimo cusub iyo taxane. Dareenkan, sida laga soo xigtay warbaahintan, Apple waxay u dagaallameysaa inay hesho xuquuqda filimka soo socda ee Robert Zemeckis.
Walaalaha Aaron iyo Jordan Kandell ayaa iibiyay xuquuqda filimka Mr. Lucky shirkadda wax soo saarka ImageMovers, oo ah shirkad wax soo saar oo uu leeyahay Robert Zemeckis. Zemeckis ayaa daryeeli doona soosaar oo kobci filimkan cusub kaas oo loo soo bandhigo sida majaajillo jaceyl oo ku saleysan sheeko run ah.
Walaalaha Kandell kuma cusba filim soosaarka. Shaqadiisii ​​ugu horreysay wuxuu ahaa filimka filimka ah Moana loogu talagalay Disney, oo ah kii ugu dambeeyay ee qoraal filim ah Soosocod (Adrift) waxaa jilaya Shaile Woodley iyo Sam Clafin.
Mudane Lucky wuxuu baaraya labada dhinac ee jaceylka, sida musiibada, guusha, musiibada iyo nasiibkaba sida aan u aragno. Waqtigan xaadirka ah, ma ogin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mashruucan cusub maadaama ay iyagu ogyihiin oo kaliya shirkadaha u tartamaya xuquuqda, sida Apple TV +.
Waa inaan sug dhawr maalmood, si loo arko haddii adeegga fiidiyowga ee qulqulaya uu ugu dambeyntii helo xuquuqda filimkan cusub ama haddii, ugu dambeyntii, ay gaarto adeegyo kale sida Netflix, Amazon Prime ...
Robert Zemeckis ayaa lagu yaqaan dib ugu noqoshada mustaqbalkaKumaa qaabeeyey Robert Bakayle? Forrest Gump (taas oo uu ku guuleystay laba abaalmarin oo Oscar ah oo ka socota Akadeemiyada Hollywood ee Filimka ugu Fiican iyo Agaasimaha ugu Fiican iyo sidoo kale laba Globes oo Dahab ah oo loogu talagalay Agaasimaha ugu Fiican iyo Filimka Ugu Fiican), Castaway, Polar Express, The Flight ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple ayaa gorgortan kula jirta sidii ay u iibsan lahayd xuquuqda filimkii ugu dambeeyay ee Robert Zemeckis